भर्खरै कन्चनपुरबाट आयो अत्यन्तै दुखद खबर : खुकुरी प्र’ हा र गरी दम्पत्तिको वि ’भ त्स ह ’त्या – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै कन्चनपुरबाट आयो अत्यन्तै दुखद खबर : खुकुरी प्र’ हा र गरी दम्पत्तिको वि ’भ त्स ह ’त्या
admin February 27, 2020 समाचार	0
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ कलुवापुरका एक दम्पत्तिको धा’रिलो ह’तियार प्रयोग गरी ह’ त्या भएको छ । घरभित्रै आज दिउँसो ५२ वर्षीय जयलाल भण्डारी र उहाँकी २२ वर्षीय श्रीमती धनादेवी भण्डारीको श: व फेला परेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र रावलका अनुसार मृ’त क दुवैको श: व अलगअलग कोठामा फे’ला परेको छ । धनादेवीको श: व भान्सा कोठामा र जयलालको श’व सयन कक्षमा फे’ला परेको उहाँले बताउनुभयो ।
जयलालको घाँटीमा र धनाको टा’उ कोमा चो’ट लागेको छ । श’व श’ङ्कास्पद अवस्थामा फे’ला परेपछि प्रहरीले अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाएको छ । श: व परीक्षणका लागि महाकाली अस्पताल लगिएको छ । क्यान्सरका कारण पहिलो श्रीमतीको निधन भएपछि धनादेवीसँग जयलालले दोस्रो विवाह गरेका थिए । उनीहरुको छ महिनाकी छोरी रहेकी छन् ।
विवाहबाट हराएका तीन वर्षिय बालक अयुष पोखरीमा मृ: त भेटिए
सिरहा- सिरहामा पोखरीमा बालकको श: व भेटिएको छ । सिरहाको कल्याणपुरमा पोखरीमा डुवेको अवस्थामा सिरहाको कल्याणपुर नपा ३ इटारीपर्साहीका राजकुमार मण्डलको छोरा ३ वर्षि अयुष मण्डलको श: ब पोखरीमा फेला परेको हो ।
हिजो छिमेकीको विवाह रहेकाले कतिखेर हराएको भन्ने एकीन नभएको र बच्चा नभेटिएपछि रातभरी खोज तलास गरेपनि विहानमात्र पोखरीमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।बच्चा आफै खेल्दै जाने क्रममा डु वे को हुन सक्ने अनुमान गरेपनि घ ट नाबारे थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सुचना अधिकारी डिएसपी विनोद अधिकारीले बताए ।
यो पनि, भगवान् शिवले किन लगाउँछन् बाघको छाला ?
भगवान शिव भन्ने बित्तिकै तपाईंलाई एउटा स्वरुपको याद हुन्छ । हातमा त्रिशुल लिएका, बाघको छाला बेरेका, शिरमा चन्द्रमा र गंगासहित नागको माला लगाएका । धर्मग्रन्थहरूमा भगवान शिवको जुन स्वरुपको वर्णन गरिएको छ त्यो निकै आश्चर्यजनक छ ।
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? शिवजीले बाघको छाला किन लगाए ? जति पनि तपाईंले तस्वीर देख्नु भएको छ त्यसमा शिवजी कि त बाघको छाला लगाएको अवस्थामा वा बाघको छालामाथि बसेको अवस्थामा देख्नु भएको छ । आखिर शिवजीले किन बाघको छाला लगाए ? यो प्रश्नको जवाफ शिव पुराणमा पाउन सकिन्छ । जसमा भगवान शिव र बाघसँग सम्बन्धित प्रसंग रहेको छ ।
पौराणिक कथाअनुसार भगवान शिव एक पटक ब्रह्माण्डको भ्रमणका क्रममा एक जंगलमा पुगे । जहाँ ऋषि मुनिको बासस्थान थियो, ऋषिमुनि परिवारसँग बस्थे । यो जंगलमा भगवान शिव निर्वस्त्र घुम्थे । शिवजी यो कुराबारे जानकार थिएनन् कि उनले बस्त्र पहिरिएका छैनन् । भगवान शिवको आकर्षक शरीर देखेर ऋषिमुनिका पत्नीहरू भगवान शिवप्रति आकर्षित भए । सबै काम छोडेर ऋषि पत्नीहरू शिवजीको पछि लाग्न थालेपछि ऋषिहरू तनावमा परे र उनीहरू शिवसँग क्रोधित भए । तर उनीहरूले निवस्त्र हिँड्ने भगवान शिव हुन् भन्ने चिनेनन् । त्यसपछि ऋषिहरूले निर्वस्त्र व्यक्तिलाई सजाय दिने उपाय रचे ।
ऋषिहरूले वनमा एउटा ठूलो खाल्डो खनेर शिवजीका लागि पासो थापे । उक्त पासोमा शिवजी परे । त्यो गहिरो खाल्डोमा ऋषिहरूले एउटा बाघ पनि हालिदिए ताकि त्यसले ति निर्वस्त्र व्यक्ति(शिवजी)लाई खाओस् । तर त्यस्तो भएन । खाल्टोबाट ति निर्वस्त्र व्यक्ति बाघको छाला बेरेर निस्किए । बाघलाई मारेर शिवजीले छाला धारण गरे । त्यसपछि मात्र ऋषिहरूले ति समान्य व्यक्ति नभएको थाहा पाए ।
त्यसदिनदेखि भगवान शिवजीले बाघको छाला लगाउने वा त्यसमाथि बस्ने गरेको शिव पुराणमा उल्लेख छ ।एजेन्सी
दुःखद खबरः बिपी प्रतिष्ठानमा पेटमा रहेको बच्चा र गर्भवती दुवैको मृ: त्यु पछि यस्तो तनाव